Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Lamentations 1
Nepali New Revised Version, Lamentations 1
1 मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्‍तो सूनसान भयो। त्‍यो त एक विधवाजस्‍तो भएको छ। जो एक पल्‍ट जाति-जातिहरूमा महान्‌ र प्रदेशहरूमा राजकुमारीजस्‍तै थियो, अब त्‍यो दासत्‍वमा परेको सहर भएको छ।
2 रातभरि त्‍यो धुरुधुरु रुन्‍छ, त्‍यसका गालामा आँसु बगिरहन्‍छ। त्‍यसका सबै प्रियहरूमध्‍ये, त्‍यसलाई सान्‍त्‍वना दिने कोही पनि छैन। त्‍यसका सबै मित्रहरूले त्‍यसलाई धोका दिएका छन्‌, र तिनीहरू त्‍यसका वैरीहरू बनेका छन्‌।
3 दु:ख र कठोर दासत्‍वपछि यहूदा प्रवास लगियो। अब त्‍यो अन्‍यजातिहरूका बीचमा रहन्‍छ, त्‍यसले कुनै विश्रामको स्‍थान पाउँदैन, त्‍यसलाई खेदो गर्नेहरू सबैले दु:खको बीचमा त्‍यसलाई पक्रेका छन्‌।
4 सियोन जाने बाटोहरूले विलाप गरिरहेका छन्‌, किनभने ठहराइएका चाड़हरूमा कोही पनि आउँदैन। त्‍यसका सबै मूल ढोकाहरू उजाड़ छन्‌, त्‍यसका पूजाहारीहरू सुस्‍केरा मार्दछन्‌। त्‍यसका कुमारीहरू दु:खित छन्‌, अनि त्‍यो कठोर वेदनामा छ।
5 त्‍यसका शत्रुहरू त्‍यसका मालिक भएका छन्‌, त्‍यसका विरोधीहरू आराममा छन्‌, त्‍यसका धेरै पापहरूले गर्दा परमप्रभुले त्‍यसलाई दु:ख दिनुभएको हो। त्‍यसका बालकहरू शत्रुहरूका अगि कैदमा लगिएका छन्‌।
6 सियोनकी छोरीबाट त्‍यसका सबै गौरव गइहालेका छन्‌। त्‍यसका राजकुमारहरू खर्क नपाउने मृगहरूजस्‍तै छन्‌। तिनीहरू दुर्बल भएर खेद्‌नेहरूका अगिअगि भागेका छन्‌।
7 यरूशलेमले आफ्‍ना दु:ख र सङ्कष्‍टका दिनमा उहिले भएका आफ्‍ना सबै बहुमूल्‍य कुराहरूको सम्‍झना गर्छ। जब त्‍यसका मानिसहरू शत्रुहरूका हातमा परे, त्‍यसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन, त्‍यसका शत्रुहरूले त्‍यसलाई हेरे र त्‍यसको विनाशमा ठट्टा गरे।
8 यरूशलेमले घोर पाप गर्‍यो, यसैले त्‍यो अशुद्ध भएको छ। त्‍यसलाई मान गर्ने सबैले त्‍यसलाई तुच्‍छ ठान्‍दछन्‌, किनभने तिनीहरूले त्‍यसको नग्‍नता देखेका छन्‌। त्‍यो आफै सुस्‍केरा मार्छ र मुख फर्काउँछ।
9 त्‍यसको अशुद्धपना त्‍यसको फरियामा टाँसियो, त्‍यसले आफ्‍नो आउने दुर्दिनलाई सम्‍झेन। त्‍यसको पतन भयङ्कर थियो, त्‍यसलाई सान्‍त्‍वना दिने कोही थिएन। “हे परमप्रभु, मेरो कष्‍टलाई हेर्नुहोस्‌, किनभने शत्रु विजयी भएको छ।”
10 त्‍यसका सबै धन खोस्‍न शत्रुले आफ्‍नो हात हालेको छ। जसलाई तपाईंले आफ्‍नो सभामा पस्‍न मनाई गर्नुभएको थियो, तिनै अन्‍यजातिहरू त्‍यसको पवित्रस्‍थानमा पसेका त्‍यसले देख्‍यो।
11 त्‍यसका सबै मानिसहरू सुस्‍केरा मार्दै अन्‍नको खोजीमा छन्‌। आफ्‍नो प्राण बचाउनलाई तिनीहरू खानेकुरासित आफ्‍ना धन-सम्‍पत्ति साट्‌दछन्‌। “हे परमप्रभु, हेर्नुहोस्‌ र विचार गर्नुहोस्‌, किनभने म तुच्‍छ गनिएको छु।”
12 “यताबाट भएर जाने तिमीहरू सबै, के तिमीहरूलाई त्‍यसको केही वास्‍ता छैन? चारैतिर हेर र विचार गर, आफ्‍नो भयानक क्रोधको दिनमा, परमप्रभुले मलाई दिनुभएको कष्‍टजस्‍तै अरू कुनै पीडा छ र?
13 “उहाँले उच्‍चबाट आगो झारिदिनुभयो, त्‍यो मेरो हड्डीभित्र पठाउनुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाको लागि जाल फिँजाउनुभयो, र मलाई फर्काउनुभयो। उहाँले मलाई उजाड़ पारेर दिनभरि नै निर्बल राख्‍नुभयो।
14 “मेरा पापहरू एक जुवामा बाँधिएका छन्‌। उहाँकै हातद्वारा ती बाँधिए, ती मेरो काँधमा राखिएका छन्‌, परमप्रभुले मेरो बल घटाउनुभएको छ। उहाँले मलाई तिनीहरूका हातमा पारिदिनुभयो, जसको म सामना गर्न सक्‍दिनँ।
15 “परमप्रभुले मेरा सबै योद्धालाई बहिष्‍कार गर्नुभएको छ, मेरा जवान मानिसहरूलाई धूलोपीठो पार्नलाई मेरो विरुद्धमा उहाँले फौज जम्‍मा गर्नुभएको छ। उहाँको कोलमा, दाखझैँ परमप्रभुले यहूदाकी कुमारीलाई पेल्‍नुभएको छ।
16 “यी सबैको कारणले म रुँदैछु, मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बहन्‍छ। मलाई सान्‍त्‍वना दिन मेरो नजिक कोही छैन, मेरो आत्‍मा पुनर्जीवित गराउने कोही छैन। मेरा बालकहरू बेसहारा छन्‌, किनभने शत्रु प्रबल भएको छ।”
17 सियोन बिन्‍ती गर्नलाई आफ्‍नो हात पसार्छ, तर त्‍यसलाई सान्‍त्‍वना दिने कोही छैन। परमप्रभुले याकूबको विरुद्धमा त्‍यसका छिमेकीहरू त्‍यसका शत्रु होऊन्‌ भनी हुकुम गर्नुभएको छ। तिनीहरूका बीचमा यरूशलेम एक अशुद्ध थोक भएको छ।
18 “परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्‍छ, तरै पनि म उहाँको विरुद्धमा बागी भएको थिएँ। हे सबै जातिहरू, सुन, र मेरो कष्‍टलाई हेर। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू निष्‍कासित गरिएका छन्‌।
19 “मैले आफ्‍ना प्रेमीहरूलाई बोलाएँ, तर तिनीहरूले मलाई धोका दिए। आफ्‍नो बल पुनर्प्राप्‍त गर्नलाई खानेकुरा खोजेर नपाउँदा सहरमा मेरा पूजाहारीहरू र धर्म-गुरुहरू नष्‍ट भए।
20 “हे परमप्रभु, हेर्नुहोस्‌, म दु:खमा परेको छु। म साह्रै बागी भएको कारणले मेरो प्राण मभित्र मड़ारिन्‍छ, मेरो हृदय मभित्र छटपटिन्‍छ। बाहिर तरवारले शोकित पार्छ, भित्र मृत्‍यु मात्र छ।
21 “मानिसहरूले मेरा सुस्‍केरा सुनेका छन्‌, तर मलाई सान्‍त्‍वना दिने कोही छैन। मेरा सबै शत्रुहरूले मेरो विपत्तिको कुरा सुनेका छन्‌। तपाईंले यसो गर्नुभएकोमा तिनीहरू खुशी छन्‌। तपाईंले घोषणा गर्नुभएको दिन ल्‍याउनुहोस्‌, र तिनीहरू पनि मैजस्‍ता होऊन्‌।
22 “तिनीहरूका सबै दुष्‍ट कामहरू तपाईंको सामु आऊन्‌, अनि मेरा सबै पापहरूको कारण मलाई गर्नुभएझैँ तिनीहरूमाथि पनि त्‍यस्‍तै व्‍यवहार गर्नुहोस्‌। म धेरै सुस्‍केरा मार्दछु, अनि मेरो मन निर्बल छ।”
Jeremiah 52 Choose Book & Chapter Lamentations 2